Tonga amin'ny fomba ofisialy any Espana ny Honor 9X amin'ity herinandro ity | Androidsis
Ny Honor 9X dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana
Iray volana lasa izay dia nambara fa ny Honor 9X dia ho tonga any Eropa, na dia hanao fanovana maromaro aza aho. Ary farany, ity modely ity dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana, satria ny marika aza efa nanambara. Modely mitazona ny ankamaroan'ny famaritana ny telefaona voalohany, na dia misy fiovana maromaro aza, izay zava-dehibe.
Safidy tsara io Honor 9X io handray kajy ao anatin'ny elanelam-potoana premium. Mamela antsika voafaritra voafaritra amin'ny ankapobeny, izay azontsika antenaina ao anatin'ity sehatry ny tsena ity. Ankoatry ny fananana vidiny mora azo, toy ny mahazatra amin'ny marika.
Ny telefaona dia efa niavaka tamin'ny famelabelarana azy ho an'ny endriny, rehefa miloka amin'ny fakantsary eo aloha. Volavola iray izay manampy amin'ny fanavahana azy amin'ny modely hafa eo amin'ny faritra misy azy, ary mamela anao hanao ny ankamaroan'ny efijery amin'ity tranga ity. Ao an-damosiny dia manana fakantsary telo izahay, ho fanampin'ny sensor amin'ny dian-tànana.
1 Famaritana voninahitra 9X
Famaritana voninahitra 9X
Amin'ny ambaratonga teknika dia mahita maodely ao anatin'ny elanelam-potoana premium isika, izay ampaham-pandrosoana mitombo haingana. Ity Honor 9X dia manolotra ny miavaka manokana amin'ity fizarana ity, miaraka amin'ny fijerena manokana ireo fakantsariny, izay tsy isalasalana fa iray amin'ireo tanjany. Izy io koa dia mamela antsika bateria tsara, izay tokony hanome antsika fahaleovan-tena tsara. Ireto ny andinindininy feno amin'ny telefaona:
Screen: LCD IPS 6,59-inch miaraka amin'ny FullHD + Resolution (2.340 x 1.080 teboka)
Mpandrindra: Huawei Kirin 710F
Tahiry anatiny: 128 GB
Rafitra miasa: Android 9 Pie miaraka amin'ny EMUI 9.1 ho toy ny sosona fanaingoana
Fakan-tsary any aoriana: 48 MP misy vavahady f / 1.8 + zoro 8 MP misy zoro f / 2.4 + 2 MP f / 2.4 sensor lalina
Fakan-tsarimihetsika anoloana: 16 MP misy bikan'ny f / 2.2 miaraka amin'ny mekanisma pop-up
Fifandraisana: Dual SIM, WiFi ac, Bluetooth 4.2, USB-C, GPS, GLONASS, 4G / LTE
Ny hafa: mpamaky ny rantsantanana aoriana
Refy: 163,5 x 77,3 x 8,8 mm
Milanja: 196,8 grama
Tonga ny Honor 9X miaraka amina fakan-tsary any aoriana any amin'ity tranga ity. Ny sensor voalohany dia 48 MP, izay efa mahazatra amin'ny mid-range sy premium mid-range. Miaraka amin'ity sensor ity dia antenaina ny zoro 8 MP sy ny sensor ho an'ny fandrefesana lalina, 2 MP amin'ity tranga ity. Tahaka ny fanao amin'ny marika sinoa, ny fakantsary dia ampiasain'ny faharanitan-tsaina artifisialy an'ny orinasa hamantatra ny sehatra, ankoatry ny fananana modely fakana sary fanampiny. Raha ny fakantsary anoloana, miaraka amin'ny mekanisma pop-up, dia 16 MP amin'ity tranga ity, izay manana faharanitan-tsaina artifisialy ihany koa.
Ny bateria dia singa iray hafa miavaka indrindra, miaraka amin'ny fahaiza-manao tsara 4.000 mAh. Izy io dia zavatra iray izay tokony hanome antsika fahaleovan-tena tsara amin'ity tranga ity, haharitra mandritra ny tontolo andro, indrindra miaraka amin'ny processeur izay ananan'ny telefaona. Etsy ankilany, ny sensor ny dian-tànana dia misy amin'ity tranga ity, miorina ao aoriana. Fahita amin'ny marika sinoa ny mitazona azy any aoriana amin'ny maodeliny antonony.
Taorian'ny tsaho nandeha herinandro io Honor 9X io dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy ihany tany Espana. Hovidiana amin'ny fomba ofisialy amin'ity herinandro ity ny telefaona. Na dia amin'izao fotoana izao dia tsy ho vita ao amin'ny The Phone House sy MediaMarkt, ary koa amin'ny tranokala ofisialin'ny orinasa. Azo inoana fa halefa any amin'ny magazay hafa ihany koa izy io atsy ho atsy, saingy tsy nisy ny pitsopitsony voamarina na nomena momba izany. Ka tsy maintsy miandry isika vao hahalala bebe kokoa amin'ity lafiny ity amin'ny marika ihany.
Tonga amina kinova tsy manam-paharoa eny an-tsena ilay fitaovana. Na dia afaka mifidy ny mainty sy ny manga aza isika amin'ity tranga ity. Ny vidin'ny Honor 9X any Espana dia 269 euro. Vidiny tsara ho an'ny maodely ao anatin'ity sehatry ny tsena ity, izay tsy isalasalana fa mahatonga azy io ho safidy hodinihina.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ny Honor 9X dia natomboka tamin'ny fomba ofisialy tany Espana
Ny tsikombakomba manan-danja amin'ny Samsung Galaxy A51 dia tafaporitsaka